“Waxaa naga go’an in dadka magaalada Muqdisho ay soo doortaan hoggaankooda”. ENG Yariisow | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR “Waxaa naga go’an in dadka magaalada Muqdisho ay soo doortaan hoggaankooda”. ENG...
“Waxaa naga go’an in dadka magaalada Muqdisho ay soo doortaan hoggaankooda”. ENG Yariisow
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey), waxana ay ka wada hadleen qaabka ugu habboon ee doorashooyin uga dhici karaan 2020 magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Previous articleShirkii wada-tashiga ahaa ee u dhexeeyay bulshada rayidka iyo wasaaradda dastuurka oo war-murtiyeed laga soo saaray.
Next articleDhalinyara ka kala yimid qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir oo taba-bar loogu soo xiray Muqdisho-(sawirro).